मलामीदेखि सलामीसम्म, 'सेना नै सन्तान सेनानै आफन्त !' - Himali Patrika
मलामीदेखि सलामीसम्म, ‘सेना नै सन्तान सेनानै आफन्त !’
हिमाली पत्रिका ४ जेष्ठ २०७८, 12:42 pm
काठमाडौं– अस्पताल बाहिरपट्टि कुरिरहेका आफन्त त’नावमा हुन्छन्– बिरामीको अवस्था ग’म्भीर छ? निको हुने हो होइन? यस्तै कुरा मनमा खेलिरहेको हुन्छ। मृ’त्यु कसले रोज्ला र! तर पनि पुकारा हुन्छ– मृ’त्युचाहिँ तत्काल नहोस्!
भइहालेमा पनि को’रोना नेगेटिभ भएपछि मात्र होस्। नेगेटिभ भए लास देख्न पाइन्थ्यो! आफन्त वरिपरि बसेर श्रद्धाञ्जलि दिन पाइन्थ्यो! मलामी त जान पाइन्थ्यो! आफ्नो संस्कारअनुसार अ’न्त्ये’ष्टि कर्म गरिन्थ्यो! बाहिर यस्तो विलाप गर्दागर्दै चिकित्सकको प्रयास निरर्थक बन्छ।
कतिपय संक्रमितको ज्यान बितिजान्छ। अनि कु’रुवा र आफन्तको कोलाहल सुरु हुन्छ अस्पतालमा। प्रिय व्यक्तिको श’व न छु’न न हेर्न पाइन्छ! वार्ड वा आईसीयूबाट श’व सीधै श’वगृ’हमा लगिन्छ। ठूलो ची’त्कार सुनिन्छ आफन्तको। अ’न्त्ये’ष्टिमा लैजाँदा आफन्त मलामी जान पाउँदैनन्।
गइहाले पनि पर बसेर ‘अ’छूत’ जसरी हेर्न विवश हुन्छन् सन्तान! आफन्त वियोग छँदै छ, अ’न्तिम सं’स्कारमा सहभागी हुन नपाउँदा मन भारी हुन्छ। त्यसै बेला ’भरोसा बनेर आइपुग्छ नेपाली सेना, सन्तानजस्तै। श’व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिन्छ।
श’व’गृहको अँध्यारो कोठाबाट निकाल्न सै’न्य जवान खटिन्छन्। पीपीईले शरीर ढाकेका जवानले निंसक्रमण गर्दै श’व गाडीमा हाल्छन्। अनि उनीहरुले नै अ’न्त्ये’ष्टिस्थ’लतर्फ पुर्‍याउँछन्। घा’टमा श’व झार्छन्। अन्तिम सम्मानस्वरुप सलामी अर्पण गर्छन्।
’दागबत्ती दिन्छन्। श’व पूरै नजलेसम्म निगरानी गर्छन्। आफन्तलाई अन्तिम चिनो अस्तु दिएपछि सेनाको जिम्मेवारी सकिन्छ। मलामी जानेदेखि सलामी दिनेसम्मको काम सेनाबाट हुँदै आएको छ कोरोनाबाट निधन भएकाहरुको। त्यसैले महामारीमा ‘म’र्दाको मलामी’बनेको छ नेपाली सेना।
सरकारले संक्रमितको श’व व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गत वर्ष नै सेनालाई दिएको हो। श’व व्यवस्थापनका लागि देशैभर यु’निट खटिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी सन्तोषवल्लभ पौडेल बताउँछन्। त्यसो त नेपाली सेनाले कोरोना भाइरसको पहिलो चरणदेखि नै विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ।
अस्पतालको श’व गृहदेखि चितामा आ’गो ननिभ्दासम्म सेनाले नि’गरानी गरिरहने पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कोरोनाबाट ज्यान गुमाएकालाई अन्तिम समयमा घरपरिवार र आफन्तले न छुन पाउँछन् न त हेर्न। शवको सारथी नै सेना हो। सलामी त राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई दिइन्छ हैन र?
अन्तिम समयमा श’व छुनु र हेर्न नपाउनुको पी’डा कम होस् भनेर सम्मानस्वरूप सलामी दिने गरिएको उनको भनाइ छ। पौडेल भन्छन्, ‘हेर्न छुन नदिने मन त कसको हुन्छ र? तर भाइरस नै यस्तै छ। आफन्तलाई बचाउनकै लागि यस्तो गरिएको हो।’
कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गु’माएकाको श’व व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा सेनाका ८ वटा शव वाहन परिचालित छन्। काठमाडौं उपत्यकाबाहिर स्थानीय तह र जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वयमा श’व व्यवस्थापन र म’हामारी नियन्त्रणका कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ।
स्वास्थ्य सामग्री भि’त्र्याउने देखि दुर्गममा गई स्वाब संकलन पनि गरेको थियो। यस वर्ष सेनाले हो’ल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्माण हुने होल्डिङ सेन्टर तथा भौतिक संरचनालाई बहुउपयोगी बनाइने सैन्य अधिकारीहरु बताउँछन्। नेपाल समयबाट